म हयातको एनआरएन होईन हजुर !
गत अक्टोबर 15-17 तारिखसम्म हयात होटलमा नवौं एनआरएन विश्व सम्मेलन र नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको थियो । निर्धारित समयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिएन र निर्धारित महत्वपुर्ण सत्रहरु पनि रद्ध गरिएको थियो । निर्वाचन कार्यक्रम पनि अनेक अन्योलका बिच 16 तारिखमा तय भएको मतदान प्रकृया 17 तारिखका दिन वैद्युतिय मतदानलाई छोडेर मतपत्र मार्फत सम्पन्न गर्नु परेको थियो ।
विश्व सम्मेलन भन्दा धेरै प्रतिनिधिहरु निर्वाचन प्रती केन्द्रित भएको जस्तो प्रष्ट देखिन्थ्यो । चित्त बुझे पनि नबुझे पनि मतदान त गर्नु पर्यो भनेर 17 तारिख बिहान हयात होटल परिसर पुगे । त्यहाँ केही साथिहरु मतदानको लाईनमा बसि सक्नु भएको देखेर म पनि सिधै लाईनमा बसे । त्यही मतदानको लाईनमा बस्दा देखिएका केही दृश्यहरु मैले मोबाईलमा कैद गरें जुन यहाँ पोष्ट गरेको छु । नारा जुलुस एकातिर थियो भने पानी पिइसके पछि खाली बोतल फुलहरु भएकै ठाउँमा छरपस्ट फालिएका थिए । त्यस्तै गरेर उमेदवार र तिनका प्रतिनिधिहरुले लाईनमा बाडेका पोष्टर र कार्डहरु पनि त्यसरी नै छरपस्ट फालिएका थिए ।
केही समय पछि जर्मन एनसीसीका पुर्व अध्यक्ष (जो यूरोप उपसंयोजक पदको उमेदवार हुनु हुन्थ्यो) नवराज रोस्याराज्यु होटल कै एक सफाई कर्मचारिको साथमा त्यहाँ छरपस्ट फालिएका पानीका बोतल लगायत फोहोर उठाउदै आउनु भयो र केही मात्रमा भए पनि सभ्य एनआरएनको परिचय देख्न पाईयो । एक जना साथिले त कसैको वास्ता नगरी चुरोटको धुंवा त्यसै लाईनमा उडाउदै थिए । त्यो बिहान पख तर घामले पोलेको अवस्थामा चुरोटको धुंवाले अरुलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने मतलब ती साथिलाई थिएन । मेरो अघि पछि उभिनु भएका साथिहरु प्राय बिकसित र सभ्य भनिएका मुलुकबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुदो रहेछ । भित्र मतदान गर्ने ठाउँमा पुगे पछि पो थाहा भयो लाईनमा चुरोटको धुंवा उडाउने साथी मध्यपुर्वबाट नै प्रतिनिधित्व गर्नु हुदो रहेछ । भन्न मन लाग्यो म हयातको एनआरएन होईन हजुर !
कल्याण कोष स्थापना गर्न एनआरएनएद्वारा उच्चस्तरीय समिति गठन
अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसबिरुद्ध लड्न नेपाल…
एनआरएनएको गरिमा कम हुनुमा दोषी को
समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा स्थापित गैर आवासीय नेपाली संघले केहि बर्ष…
युगाण्डामा आयोजित विश्व हिन्दी दिवसमा एनआरएनए युगाण्डा सहभागी
एनआरएनएको टोलीद्वारा पाँच बुदाँमा छलफल
एनआरएनए सचिवालय बैठकले ग¥यो १७ बुँदे निर्णय, पाँचै उपाध्यक्षलाई विभागको जिम्मेवारी
आईसीसीमा मनोनयनका लागि नाम पठाउन एनआरएनएको अनुरोध